Abavelisi beemoto-abavelisi basechina baseChina kunye nababoneleli
✭ Eli candelo leplastiki lelona candelo liphambili leCandelo loLawulo kunye neCharge Connector esezantsi.
✭Izinto ezisetyenzisiweyo kule nxalenye yeplastiki zizinto ze-ABS ezingacimi umlilo, Le nxalenye yeplastiki yinxalenye yokubonakala kwemveliso kunye nenxalenye ebalulekileyo yendibano. Idityaniswe ngokuqinileyo kwigobolondo eliphakathi kunye namantongomane ama-6 obhedu, kwaye kufuneka iphumelele uvavanyo lweemitha ezi-5.
✭Le nto ye-ABS engenakucima umlilo ifikelele kwinqanaba le-V0, iqinisekisa ukhuseleko kunye nozinzo ngexesha lokutshaja ebhodini. Ubumba lweplastiki lwale nxalenye yeplastiki lwenziwa ngumbumba weepleyiti ezintathu. imbaleki ebandayo kwindawo esembindini, olu ncedo lunokwenza yonke inaliti yemveliso ngokufanayo kwaye ingakhubazeki ngokulula.
✭Le seti yokubumba ngenaliti, ubomi bethu bokuyila ngamaxesha angama-500,000. Ukulungiswa phakathi kweemveliso kuyilelwe ngamantongomane obhedu angaphezulu. Amantongomane obhedu abekwa kwisikhunta emva koko afakwe. Oku kuqinisekisa ukuba i-nut yobhedu inokuqiniswa ngakumbi kwinxalenye yeplastiki.
✭ Le yinxalenye yeplastiki etywiniweyo ngaphakathi emotweni, kusetyenziswa ubushushu obuphezulu kunye nengqele enganyangekiyo PA66 + 30% yezinto zeplastiki. Ubushushu bendawo yokusebenza yale nxalenye buphakathi kwe -40 kunye +100 degrees. Iyaxhathisa kwimozulu yangaphandle kwaye ihlangabezana nomgangatho weVolkswagen ka-50185.
✭ Le nxalenye yeplastiki yinxalenye yeefilitha zeoyile zokufakwa kweplastiki ezivela kumthengi waseJamani. Ubunzima obukhulu beli candelo kukuba udonga lwendonga yi-0.45mm kuphela. Le seti yokubumba yamkela umgangatho weHASCO. Izinto eziphambili ze-1.2343 (ESR) zentsimbi eyomeleleyo.
✭ Ubume besikhunta bulula ngokulula, kubini kufakwa izakhiwo ezingundoqo ze-Becu. Izinto eziphathekayo yi-PA6 + 30GF, kwaye umphezulu kufuneka ube yi-VDI-24. Imfuneko yokuchaneka kwemveliso +/- 0.05. Ixesha lokuhambisa ukungunda ziintsuku ezingama-45, kwaye umjikelo wenaliti yimizuzwana eyi-12. Ukubumba kwavavanywa kabini kuphela, kwaye umthengi wasicela ukuba silungiselele ukuthunyelwa kwelinye ilizwe kumzi-mveliso waseJamani wokubumba inaliti.
✭ Le yinxalenye ye-Angle yeplastikhi yeVolkswagen, isebenzisa ubushushu obuphezulu kunye ne-PA66 enganyangekiyo + 30% yezinto zeplastiki. Iqondo lobushushu bendawo yokusebenza yale nxalenye liphakathi kwe -40 kunye ne-+150 degrees. Iyaxhathisa kwimozulu yangaphandle kwaye ihlangabezana nomgangatho weVolkswagen ka-50185.
✭ Le mveliso isetyenziselwa indawo yokuxhasa amalungu ezithuthi ukwenza ezinye iinxalenye zemoto zizinzile kwaye zithembeke. Le seti yokubumba yamkela umgangatho weHASCO. Izinto eziphambili zi-1.2344 (ESR) zentsimbi eyomeleleyo.
✭ Ubume besikhunta bulula ngokulula, kubini kufakwa izakhiwo ezingundoqo ze-Becu. Izinto eziphathekayo yi-PA6 + 30GF, kwaye umphezulu kufuneka ube yi-VDI-21. Imfuneko yokuchaneka kwemveliso +/- 0.05. Ixesha lokuhambisa isikhunta ziintsuku ezingama-30, kwaye umjikelo wenaliti yimizuzwana engama-30. Ukusetyenziswa kwesikhunta i-INCOE imbaleki eshushu kwimbaleki ebandayo yesango elingaphantsi. Ukubumba kwavavanywa kabini kuphela, kwaye umthengi wasicela ukuba silungiselele ukuthunyelwa kwelinye ilizwe kumzi-mveliso waseJamani wokubumba inaliti.
✭ Singazenza zonke iintlobo zesigcina-ntloko njengokufunwa ngumthengi, ikowuteshini inokubonelelwa ngokusekwe kumzobo wabathengi okanye isampulu. ukungunda yethu zombini ezibalaseleyo esemgangathweni kunye nengqiqo ngexabiso.
✭ Le nxalenye yeplastiki yinxalenye yesigcina-ntloko esivela kumthengi wase-USA. Le seti yokubumba yamkela umgangatho weHASCO. Izinto eziphambili ze-1.2343 (ESR) zentsimbi eyomeleleyo. Ubume besikhunta bulula, kunye nezinto ezine ezizimeleyo zokufaka izinto. Izinto zemveliso zizinto zeplastiki ze-PP, kwaye umphezulu kufuneka ube yiPolish600. Ixesha lokuhambisa isikhunta ziintsuku ezingama-45, kwaye umjikelo wenaliti yimizuzwana engama-37. Ubume balo mngundo buntsonkothile, kunye nezilayida ezine ezinkulu kunye nabaphakanyisi ababini abakhulu. Ukukhutshwa kwamkela ukuthambeka okungafunekiyo kunye nokudityaniswa kwebhlokhi yokutyhala.
✭ Uyilo lokuhamba kwesikhunta kufuneka luhlulwe ngokulinganayo ukuqinisekisa ukuba imveliso inokupholiswa ngokufanayo. Yenza imveliso ifezekise ubungakanani bokuchaneka okuphezulu kunye nokubonakala komgangatho ophezulu.
✭ Ukuba uneemveliso ezifanayo, nceda uzive ukhululekile ukuba sivumele ukwenza ngumngundo kuwe. Umgangatho wethu kunye nenkonzo zezona zilungileyo.
Iinxalenye Car Ikubumbe
✭ Le nxalenye yeplastiki yinxalenye yemoto evela kumthengi waseFrance. Le seti yokubumba yamkela umgangatho weHASCO. Izinto eziphambili ze-1.2343 (ESR) zentsimbi eyomeleleyo.
✭ Ubume sokubumba ilula, kunye Lifters ezimbini izakhiwo. Izinto eziphathekayo yi-PA66 + 30GF, kwaye umphezulu kufuneka upolishwe # 600. Ukubumba de
Ixesha lokutywala ziintsuku ezingama-35, kwaye umjikelo wenaliti yimizuzwana engama-32. Ukubumba kwavavanywa kabini kuphela, kwaye umthengi wasicela ukuba silungiselele ukuthunyelwa kwelinye ilizwe kumzi-mveliso waseFransi wenaliti.
✭ Imithombo yeendaba yokuhluza eyenziwe ngumthengi yimixube eyahlukeneyo eyenziwe ngeglasi yefayibha okanye izinto zokwenziwa ezivumela unxibelelwano olufanelekileyo kunye ne-bio fuels kunye ne-carbon particles ezichithwe kwioyile. Baqinisekisa ukusebenza kweyona moto iphezulu nokuba kungeniswe ii-oyile «zobomi obude» obutsha, izongezo, izimbiwa kunye neoyile ezingezizo ezamaminerali kunye nokuhla kwesiphumo. Ubume beendaba zokucoca ulwelo ezitsha nezesintu ziqinisekisa ukungena okuphezulu kwaye ke ilahleko yomthwalo omncinci kwinkqubo yokuthambisa injini.
✭ Le nxalenye yeplastiki yinxalenye yeefilitha zeoyile zokufakwa kweplastiki ezivela kumthengi wase-Itali. Le seti yokubumba yamkela umgangatho weHASCO. Izinto eziphambili zi-1.2344 (ESR) zentsimbi eyomeleleyo. Ubume besikhunta bulula, kunye nezinto ezine ezizimeleyo zokufaka izinto. Izinto ezibonakalayo ziyi-PA6 + 30GF, kwaye umphezulu kufuneka ube yi-VDI-33. Ixesha lokuhambisa ukungunda ziintsuku ezingama-40, kwaye umjikelo wenaliti yimizuzwana engama-38. Ukubumba kwavavanywa kabini kuphela, kwaye umthengi wasicela ukuba silungiselele ukuthumela ngaphandle kumzi-mveliso wase-Itali wenaliti yokubumba.